Izinkinga Eziphezulu Zezomthetho ngeBlogging | Martech Zone
Eminyakeni embalwa eyedlule, elinye lamakhasimende ethu labhala okuthunyelwe okuhle kwebhulogi futhi bebefuna isithombe esihle abazosifaka ngaso. Basebenzise i-Google Image Search, bathola isithombe esasihlungwe njengesingenabukhosi, base basifaka kokuthunyelwe.
Ezinsukwini ezimbalwa, bathintwa yinkampani enkulu yezithombe zesitoko futhi basebenza nomthethosivivinywa wama- $ 3,000 ukukhokhela ukusetshenziswa kwezithombe nokugwema izingqinamba zomthetho ezihambisana nokuthola icala lokwephulwa kwe-copyright. Yilolo daba olusiqhubele ukubhalisela Ama-DepositPhotos ngemifanekiso engabizi futhi esezingeni eliphezulu engenazindleko.
Noma ngabe uyibhizinisi nge-blog noma, yiba ne-blog eyodwa, izingqinamba aziguquki. Vele, ngebhulogi yenkampani ungabheja ukuthi intshiseko yokushushisa ingaba nolaka ngokwengeziwe futhi izinhlawulo ziqine kakhulu. Izinkinga eziphezulu ze-3 zezomthetho nezesikweletu ama-blogger angena kuzo yilezi:
Ukuphulwa kwe-copyright - ukusetshenziswa kwemisebenzi evikelwe ngumthetho we-copyright ngaphandle kwemvume, kwephula amalungelo athile akhethekile anikezwe umnikazi we-copyright, njengelungelo lokuphinda ukhiqize, usabalalise, ubonise noma wenze umsebenzi ovikelwe, noma wenze imisebenzi ethathwe kokunye.
Ukuhlanjalazwa - ukuxhumana kwesitatimende samanga esilimaza isithunzi somuntu ngamunye, ibhizinisi, umkhiqizo, iqembu, uhulumeni, inkolo, noma isizwe. Ukwakha isithunzi, isimangalo kumele ngokuvamile sibe ngamanga futhi senziwe komunye umuntu ngaphandle kwalowo owehlisiwe.
Ukwephulwa kwe-CAN-SPAM - I-CAN-SPAM yimithetho yase-United States ehlanganisa imiyalezo ye-imeyili yezentengiso. Ukwephula umthetho kungadla imali efinyelela ku- $ 16,000 lilinye! Funda: Uyini umthetho we-CAN-SPAM?
Lokhu infographic, Umthetho webhulogi 101, ezivela eMonder Law Group zibhala lezo izingqinamba eziphezulu zezomthetho nezesikweletu kuhlotshaniswa nokubhuloga nokuthi ungakugwema kanjani.
Ukudalula: Sisebenzisa isixhumanisi sethu sokuxhuma se Ama-DepositPhotos kulokhu okuthunyelwe.
Tags: ibhulogiumthetho wokubhulogai-can-spamukophula umthethoukungcoliswadmcaumthethozomthethoicalaugaxekile
Uhlu Lokuhlola: Ungakwenza Kanjani Okuqukethwe Okubandakanya
Jul 15, 2016 ngo-1: 56 PM
Ngiyabonga ngale ndatshana! Imininingwane ewusizo kakhulu futhi eningiliziwe yalabo abahlela ukuqala ukubhuloga, hhayi kuphela. Kepha mina, kubalulekile ukwazi imithetho noma ngabe isigaba sisha kuwe ('Ignorantia non est argumentum')